Ungawuqasha kanjani uMmeli eNdiya - i-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Ungaqasha kanjani iGqwetha laseNdiya
Nginehhovisi lezomthetho elinamahhovisi eHackensack, eJersey City, eFrance, eNew Jersey naseNew York, kufaka phakathi iManhattan neBrooklyn. Muva nje sinwebise inkampani yethu yezomthetho yaba eNdiya.
Le vidiyo imayelana nokuthi ungabandakanyeka kanjani abameli eNdiya. Manje, kungani umuntu angafuna ukuqasha ummeli eNdiya? Sengibuzwe kaningi lo mbuzo.
Abantu bebelokhu bethi kimi, “Veer. Uyahlanya. Kungani wandise eNdiya? Kungani manje? Vele uqhubeke nokunwetshwa kwakho eNew Jersey eNew York. Nase-United States. ”
Well Ukuba ngummeli. Ngabona ukuthi abantu abaningi badinga umsebenzi owenziwe eNdiya. Noma ngabe isebenza nezenzo zokuhlukanisa, ukuthenga izakhiwo, noma ukubhekana nokuhlanganiswa nokuthengwa.
Ingxenye okhohlisayo ukuthi ubaphatha kanjani abameli bakho? Isibonelo, ake sithi awukhulumi ngempela isihlakala seGujarati noma isiTamil noma isiHindi noma isi-Urdu. Futhi, ngokuzumayo udinga ukubhekana nezinkinga ekhaya.
Ngabe uhlangabezana kanjani nezingqinamba eNdiya lapho useMelika? Uzisingatha kanjani izindaba emuva eNdiya ngaphandle kokumelwa okufanele ngokusemthethweni?
Lowo ngumbuzo obaluleke ngempela. Ukuzama ukuthola ukuthi ungazisingatha kanjani izinkinga eNdiya yinto engifuna ukuyixazulula kubantu abanezinkinga, kodwa angazi ukuthi ungazithinta kanjani ngempela.
Kuyinkinga engifuna ukuyixazulula kubantu abangazi ukuthi bazisingatha kanjani izingqinamba zabo ekhaya laseNdiya. Manje wenzani? Hhayi-ke, lokhu engikuthengisayo Ngimisa ihhovisi lapho ungangena khona ehhovisi leJersey City futhi ungaqasha ummeli / ummeli eNdiya.
Iqiniso lonke ungangena eHhovisi Lommeli Wase-United States ukuzobandakanya izeluleko eNdiya. Futhi laba bameli baseNdiya bangaphathwa ngabameli bakho e-United States.
Ukwenza isibonelo, Ake sithi umkhulu wakho ushonile washiya ibhizinisi elithengisa izinto nalezi zinto futhi leli bhizinisi lifuna imali eningi. Kukhona intando futhi isabalalisa ezinganeni zakwabo eziningi. Kungenzeka ezinye zalezo zingane zifile noma ziyagula. Ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani empahleni ukuthi kwenzekani ngemali lapho ungekho ngokomzimba eNdiya ukuphatha lezi zindaba?
Ongakwenza ukuletha amaphepha asehhovisi laseMelika. Sasizothola ama-Advocates aseNdiya ekhondweni. Besidlulisela amadokhumenti emuva naphambili Ngakho-ke abameli baseNdiya bayazi ukuthi licala lakho limayelana nani futhi-ke lapho niyobandakanya izinsizakalo zethu e-US ukuphatha imiphumela eniyifunayo eNdiya.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi uyazi, ukuthi kwenzekani eNdiya. Futhi uyazi lapho icala limile. Uyazi lapho ukuthengiselana kwezezakhiwo kumi khona. Ngokubandakanya inkampani yethu kuphela ubamba inethiwekhi labameli kanye nabameli bokusebenzela wena.
Iphuzu lonke ufuna ukuba lula? Ufuna futhi ukuthembeka futhi ufuna ukwethembeka. Lezi yizo zonke izinto ozifunayo futhi ozilindele kummeli wakho. Ukusebenzelana nabameli kwesinye isikhathi kuyesabisa.
Ukwazi okufunayo kuyisihluthulelo sokuqasha ummeli. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukukhuluma nabo, ukuxhumana nabo, futhi uqonde ukuthi bakuphi lapho kuqhubeka icala lakho. Yilokho esikwenza lapha Patel Soltis & Cardenas.
Sizama ukwenza kube lula kini nonke ukubhekana nommeli wakho. Futhi, ngathi ukuqiniseka ukuthi amaklayenti ethu anelisekile. Silapha ukuqiniseka ukuthi kulula ukubhekana nommeli wakho. Ukuze zikugcine zivuselelwa nokuthi ukwazi ukuxhumana kalula nommeli wakho. Kungakho lokhu kwanda kwenziwa eNdiya kwenziwa: Ukuhlinzeka amaklayenti ngale ndlela eyingqayizivele.
Uma uyithandile le vidiyo noma ufuna ukuzwa kabanzi ngezinsizakalo zethu khumbula ukushaya inkinobho efanayo futhi ubhalise? Ngiyabonga
Kuyamangaza ukuthi bangaki abantu abangibuza ukuthi ngithola kanjani ama-Indian Lawyers kanye nabameli beCaucasian abasebenza ngokubambisana. Lokhu kuvame ukuya kumpande oyimbangela yokuthi umuntu adinge ukuthola abameli e-United States abasebenza nama-Advocates ase-India nsuku zonke. Uma womabili lamasethi abameli esetshenziswa ekusebenzisaneni omunye nomunye ugcina amahora amaningi ngonyaka ngokungabizi ukuphindaphinda isondo njalo lapho kuqalwa i-mater entsha.
Sifuna ukuba yisihambeli sakho sokuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho zomthetho eNdiya.